Gabadh is dishay ka dib markii uu saaxibkeed muuqaal ka duubay | Xaysimo
Home War Gabadh is dishay ka dib markii uu saaxibkeed muuqaal ka duubay
Gabadh is dishay ka dib markii uu saaxibkeed muuqaal ka duubay
”Weli waxaan u maleeynayaa inuu idaawanayo,” sidaasi ayay Eun-ju Lee abeheed u sheegtay.
”Qof waad dili kartaa adigoon adeegsanin wax hub ah” sidaasi waxaa BBC-da u sheegay aabaheed. Culeyska dhibaatadan aad ayuu u sameen badan tahay balse dadka qaar siyaabo kala duwan ayay uga badbaadaan laakinse gabadhaydu way u suurogeli weysay inay ka badbaaddo”.
Waalidiinta Eun-ju ayaa go’aan ku gaaray inay damaanad ka qaataan go’aankaasi ay maxkamaddu gaartay iyagoo ku doodaya in xukunka lagu riday dambiilaha uu aad u jilicsanyahay. Waxayna sheegeen in xitaa haddii la xukumi lahaa laba sannadood ay aad u yaraan lahyd.